Xildhibaan Nacnac Oo Sheegay In Aanu Mar Dambe Isu Soo Sharaxayn | Hangool News
Xildhibaan Nacnac Oo Sheegay In Aanu Mar Dambe Isu Soo Sharaxayn
Hargeysa(Hangoolnews) -Xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye (Nacnac) oo ka mid ah golaha wakiilada Somaliland, kana tirsan xisbiga KULMIYE, ayaa cadeeyay inaanu doorashada dambe ee golaha wakiilada isa soo sharixi doonin, waxase uu ku taliyay in la doorto dad daacad ah oo wax qaban kara.
Xildhibaan Nacnac oo u waramay weriye Faysal fadh-fadhle oo ka tirsan Telefishanka Universal, ayaa sheegay inuu qaatay go’aan la mid ah go’aanka Madaxweynuhu ka qaatay is sharaxaadda doorashooyinka, “Murashax ma doonaayo inaan noqdo, madaxweynihii waa kaas is casilay waa kaas yidhi ma doonayo doorasho, aniguna isagaan la mid ahay oo ma doonayo, I doortaay dambe Alle ayaan ka hoos galay.” ayuu yidhi xildhibaanku, waxaanu intaas raaciyay “laakiin waxaanu leenahay dad wax qaban kara hala doorto ama xildhibaan ha noqoto ama meel kale dad Somalilander ah oo wax qaban kara oo daacad ah hala doorto, waa kaas madaxweynihii inaga tagay oo Mandelaheena ahaa oo inala soo halgamay, wax qabadkii maanta intaas uu joogay waa dawladii wax qabad, markaas kaas [Madaxweynaha] ayuun baan aniguna raacayoo I doortaay dambe u malayn maayo inay jirayso.”
Xildhibaanku, wuxuu hoosta ka xariiqay inuu ka fadhiisanayo gebi ahaanba siyaasadda, “Waanigaas ka fadhiistayba siyaasadii oo madaxweynaha qoladii raacday ayaan ku jiraa.” ayuu yidhi Xildhibaan Nacnac oo ka jawaabayay su’aal la weydiiyay.
Xildhibaan Nacnac oo laga doortay gobalka Maroodi-jeex, ayaa ah xildhibaan inta badan wax u tara mujaahidiinta iyo dadka kale ee reer Somaliland ee tabaalaysan.